Iran - BBC News Somali
Posted at 15:46 9 Oktoobar 202115:46 9 Oktoobar 2021
Maxay hay’adda sirdoonka Israa’iil ee Mossad ka qabanaysay dalka Iran?
Bishii Febrayo sanadkii 2017, koox aanan heebtooda la aqoonin ayaa jabsaday xarun cidla aheyd oo ku taallay caasimadda Iran ee Tehran halkaas oo laga dhacay dokumentiyo, khariidad, cajalado lagu keydiyay xog xasaasi ah oo ku saabsaneyd barnaaamijka nukliyeerka Iran.
Posted at 4:35 3 Oktoobar 20214:35 3 Oktoobar 2021
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan Hossein Amir-Abdollahian ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanka ay bishii la soo dhaafya isku dayeen inay kala hadlaan soo celinta wada hadallada nukliyeerka, balse uu ku xiray shuruud adag, oo hore la isku mari waayay.
Posted at 4:39 28 Sebtembar 20214:39 28 Sebtembar 2021
Raysalwasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa u sheegay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay in barnaamijka nukliyeerka Iiraan uu ka tallaabay "dhammaan khadadka cas" ee dalkiisa.
Posted at 3:39 13 Agoosto 20213:39 13 Agoosto 2021
Muxuu yahay sawirka ay Iiraan ka carootay ee ay soo bandhigeen UK iyo Ruushka?
Iiraan ayaa cambaareysay sawir "aan habbooneyn" oo ay soo bandhigeen safiirrada UK iyo Ruushka.
Posted at 12:57 5 Agoosto 202112:57 5 Agoosto 2021
Waa kuma madaxweynaha mayalka adag ee Iiraan ee maanta xilka la wareegay?
Wadaadka mayalka adag ayaa xilka la wareegaya xilli Iiraan ay ka taagan tahay xasarad dhaqaale, biyo yaraan iyo xiriirka dalkaas iyo Galbeedka oo sii xumaaday. Balse maxaan ka ognahay ninkan loogu magac daray "kawaanka Tehran"?
Posted at 4:11 5 Agoosto 20214:11 5 Agoosto 2021
Waxaa sii xoogeysanaya carada ka dhalatay weerarkii lagu qaaday markab shidaal oo dalalka reer Galbeedka ay ku eedeynayaan Iiraan, inkastoo ay Tehran iska fogeysay mas'uuliyaddiisa.
Posted at 6:12 14 Luulyo 20216:12 14 Luulyo 2021
Dal dadkiisa guurdoonka ah u furay adeeg ka caawiya shukaansiga
Iran ayaa shaaca ka qaaday adeeg cusub oo looga golleeyahay in dadka dalkaas uu ka caawiyo shukaansiga si loogu guuleysto sare u qaadidda guurka dadweynaha gudaha Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran.
Posted at 18:01 13 Luulyo 202118:01 13 Luulyo 2021
Maxay Iiraan u fududaynaysaa shukaansiga wiilasha iyo gabdhaha?
Dowladda ayaa ka walaacsan tirada dadka is furaya oo sii badanaysa iyo carruurta dhalanaysa oo yaraatay.
Posted at 17:10 27 Juunyo 202117:10 27 Juunyo 2021
Iran oo diidday in sawirro laga helo xarumaheeda nukliyeerka
Wuxuu sheegay in Iran aysan hay'adda u gudbin doonin sawirrada ku saabsan warshadaha nukliyeerka Iran.
Posted at 10:11 25 Juunyo 202110:11 25 Juunyo 2021
BBC oo dacwad ka dhan ah Iran u gudbisay Qaramada Midoobay
BBC-da ayaa Qaramada Midoobay uga dacwootay dhibaataynta Iran ay ku hayso shaqaalaha laanteeda Persian-ka.
Bog 1 of 16